Dhoola caddee oo maalin un nolosha ayaa ka daali doonta xanaaqa. - qarsoodi - Quotes Pedia
Sida aan nolosha ula soconno, waa lama huraan in aan la kulmi doonno wanaag iyo sidoo kale wakhtiyo xun oo nolosha ah. Ilaalinta a dabeecad wanaagsan oo horay u fiirin waa furaha inaga caawiya sidii aan nolosha ula qabsan lahayn. Haddii aad u maleynaysid in noloshaadu haysato dhibaatooyin badan oo aad dareemayso inaad tabaruc tahay ka dib u leexo qaybaha wanaagsan ee nolosha.
Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dhoola cadeyso oo marka aad rajo wanaagan qabtid waxaad ogaan doontaa inaad leedahay awood aad kula dagaallanto dhibaatooyinkaaga. Noloshu way kaa joogsan doontaa inay dhib kuu keento, maxaa yeelay, haatan waad xoog badan tahay oo waxaad qaadi kartaa wax walba oo jidkaaga yimaada.
Dhibaatooyinka ma dareemi doonaan wax dhib ah waxwalba. Laakiin in la gaaro hada ma fududaan. Mid ayaa laga yaabaa inuu maro marxaladaha shakiga iyo jahwareerka. Laakiin haddii aad sii wadid rajooyinkaaga markaa adiga laftaadu waad ku dhex heli doontaa xoogga aad kula dagaallanto dhibaatooyinkaaga.
Ogoow in waqtiyada wanaagsan iyo waqtiyada xun labadaba ay imaan doonaan marxalado. Waqtiyada wanaagsan, mahadnaq oo qadarin daqiiqad kasta. Waqtiyada xun, isku ilaali naftaada. Caawimaad hel markii loo baahdo oo baro casharada si aad xitaa u sii fiicnaato. Waqtiyadan oo dhan, sare u dhig rajooyinkaaga oo ogow inaad adiga kugu jirto si aad uga badbaado waqtiyada xun.
Habdhaqankan ayaa kuu maamuli doona noloshaadana macno samayn doona. Adiguna waad awoodi doontaa Caawi dadka kale markay baahi jirto maxaa yeelay waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka waranto khibradaada. Sidan, dhammaanteen waxaan heli karnaa hab aan iskula jirno oo aan nolosha uga dhigno mid midho dhal leh.
Had iyo jeer Ilaali Qur'aannada Dhoola cadeynta
Hayso xigashooyinka dhoola cadeynta
Xigashooyinka ku saabsan Farxadda iyo Dhoolatuska
Wejiyada Dhoola cadeynta
Xigashooyinka dhoola cadeynta
Iska daa. Mid ka mid ah waqtiyada ugu farxadda badan ee nolosha waa markaad hesho geesinimo inaad ku dhaafto waxa aadan beddeli karin. - Qarsoodi
Iska daa. Mid ka mid ah waqtiyada ugu farxadda badan ee nolosha waa markii aad hesho geesinimo aad ku oggolaato…
Go'aannadaada ha ku dhisin talada kuwa ay tahay inaysan la tacaalin natiijada. - Qarsoodi
Mar kasta oo aad qorsheynayso inaad go'aan gaarto, waxaad ogaan doontaa inay jiraan dad badan oo…
Waxyaabaha qaarkood waqti ayey qaataan. Dulqaad yeelo oo wanaag samee, waxyaabaha ayaa fiicnaan doona. - Qarsoodi
Waxay leedahay wabi waa dibi dhagax sababtoo ah xooggiisa, laakiin…
Dib ha fadhiisan oo arrimuhu adiga ha kugu dhacaan. Bax oo ku dhaca waxyaabo. - Qarsoodi
Waqti badan, waxyaabo ayaan ku qaddarinnaa wax uun. Tani waa wax aan waligood dhici doonin. Waa in aad…
Ugaarsigu wuxuu kaliya dilaa farxaddaada. Ha yeelin. - Qarsoodi
Bixinta wax-ka-qabashadu waa arin halis ku ah dadka maalmahan. Dabcan, waa inaadan aad u jaahil ka aheyn…